Tenisy – «Afrique Australe U14»: manohy ny lalany ny ekipa vehivavy | NewsMada
Tenisy – «Afrique Australe U14»: manohy ny lalany ny ekipa vehivavy
Nitohy omaly zoma, tany Windhoek Namibia, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ho an’ireo firenena aty amin’ny tapany atsimo na ny “Afrique Australe”, taranja tenisy ho an’ny ekipa isan-tarika, lahy sy vavy. Fifaninanana natokana ho an’ny sokajy zandriny U14. Manohy ny lalany ny ekipam-pirenena vehivavy.
Resin’i Madagasikara tamin’ny isa 3 no ho 0 i Botsoana. Raha hiverenana ny vokatra, lavon’i Harena tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/0 ; 6/1), i Mbali Qame. Lalao tsy niady mihitsy satria toy ny nanao fanazarantena fotsiny i Harena, ary tsy naharitra ora 1 akory ny lalaon’izy mirahavavy. I Ravaka indray nanilika an’i Atlang Chongwe tamin’ny seta 2 no ho 0 ihany koa. (6/1 ; 6/2) no nisarahan’izy ireo, tamin’io fihaonana izay tsy nampanano sarotra an’i Ravaka io.
Teo amin’ny lalaon’olon-droa indray, i Miotisoa sy i Harena, nandavo mora foana an’i Qame sy i Atlang tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/0 ; 6/0). Maivana tamin’ireto kilongakely malagasy ireto ireo mpifanandrina taminy, satria tsy nahazo mihitsy na “jeu” iray aza, tao anatin’ny lalao. Hikatroka amin’i Zimbaboe, ny Malagasy, amin’ity anio ity.
Ho an’ny lehilahy, resin’i Zimbaboe tamin’ny isa 3 no ho 0 ny Malagasy. Na teo aza io voka-dalao io, fantatra fa hikatroka amin’i Afrika Atsimo i Madagasikara, amin’ity anio ity.